“Uma fiicna sida ay dadku ka sheegayaan.”. Pele oo si xun u weeraray Dybala – Gool FM
(Brazil) 10 Juunyo 2017. Halyeyga reer Brazil Pele ayaa si xun u weeraray da’yarka xulka Argentina iyo kooxda Juventus Paulo Dybala isagoona ka soo horjeestay in lala bar bar dhigo Diego Maradona.
Dybala ayaa u soo if baxay sida midka loogu hadal heynta badan yahay Yurub kaddib markii uu Instituto kaga soo biiray Palermo 2012 ka hor inta uusan ku biirin Juventus oo uu kula guuleystay horyaalka Serie A marar badan oo is xigta.
23 jirka aya dhaliyay 30 gool oo horyaalka Talyaaniga ah labo sano uu joogay Turin, lagama maarmaan ayuuna u ahaa socodkii ay wiilasha Allegri ku soo gaareen finalka Champions League oo ay ugu dambeyn 4-1 uga qaaday Real Madrid.
Dybala ayaa ciyaaray 69 daqiiqo kulankii saaxiibtinimo uu xulka Argentina 1-0 uga adkaaday Brazil, laakiin Pele ayaan la dhicin wixii uu shalay ka arkay da’yarka.
“Uma fiicna sida ay dadku sheegayaan.”. Odeyga 3-da jeer ku guuleystay koobka adduunka ayaa sidaa u sheegay Tuttosport
“Waxay yiraahdeen in laga yaabo inuu dhexlo Maradona, laakiin waxa kaliya ay isaga midka yihiin waa inay kubbada ku laadaan lugta bidix.”.
Sanad ka hor wuxuu ahaa Ilaaliye/Waardiye iminkana waxaa looga yeeray xulka qaranka Ghana...(Aqriso QISO cajiib ah)
Waa runtii xidig maaha nikani labdii gool ee barca ayaa lagu sharabay Arin ma hayo dypala xataa kubad raacasho ma laha meel uun buu isk taagan yahay